I-Android Pie iza kwi-ASUS Zenfone Max kunye neMax Pro | I-Androidsis
Uhlaziyo lwe-ASUS Zenfone Max kunye neMax Pro kwiPie ye-Android
Iimpawu ezininzi zihlala zihlaziya ii-smartphones zazo kwi-Android. Yinto esiyibonayo rhoqo kwezi veki. Ngoku lixesha le-ASUS, kunye neZenfone Max kunye neMax Pro yakho. Kuba ezi modeli zimbini sele ziqala ukuhlaziya kwinguqulelo entsha yenkqubo yokusebenza. Uhlaziyo esele lubhengeziwe yinkampani uqobo.
Nangona ifike kwangoko kunokuba bekulindelwe. Kungenxa yokuba nokanye bekulindeleke ukuba kude kube li-15 ku-Epreli ifike nini. Kodwa kubasebenzisi abanenye yezi ASUS Zenfone Max kunye neMax Pro, ukulinda kufutshane kancinci. Sele befumene ngokusesikweni i-Android Pie kwizixhobo zabo.
Okwangoku, ukuthunyelwa sele kuqalile kwezinye iimarike kwiiyure zokugqibela. I-Indiya ibe lilizwe lokuqala apho i-Android Pie isungulelwe ezi zinto ze-ASUS Zenfone Max kunye neMax Pro. Ke ngumbandela wokulinda.
Njengoko sele ifundiwe, kunye nohlaziyo kwi-Android Pie, iifowuni fumana isiqwenga sokhuseleko kwinyanga kaMatshi. Baye bakhuselwe kwizisongelo ngale ndlela. Nangona amanye amajelo eendaba ebonisa ukuba iya kuba sisiqwengana sika-Epreli. Asazi ukuba yeyiphi ekugqibeleni unayo.
Kulawo anayo nayiphi na i-ASUS Zenfone Max kunye noMax Pro ezi ziindaba ezimnandi. Nangona kuthathe ixesha, sele unokufikelela kwi-Android Pie kwizixhobo zakho. Into ngokungathandabuzekiyo abasebenzisi abaninzi baya kuyibona ngendlela elungileyo. Yonwabela ngale ndlela yonke imisebenzi ekuPie ye-Android.
Akukho nto iyaziwayo malunga nokukhutshwa kohlaziyo eSpain. Ngoku iyanda kwiimarike, kungumcimbi wexesha ngaphambi kokuba ifikelele kwenye yezi ASUS Zenfone Max kunye neMax Pro ngokusemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Uhlaziyo lwe-ASUS Zenfone Max kunye neMax Pro kwiPie ye-Android
I-OnePlus 7 sele iza kuba nomhla wentetho
Ividiyo ibonakala ibonisa iflegi yeflegi yeRedmi Pro 2 ene-Snapdragon 855